Ziziphi i-SQL Injections? - Insight From Semalt
Injection ye-SQL yinto eqhelekileyo, apho abaninzi abahlaseli bafumana ukusetyenziswa kuze kube namhlanje. Olu hlaselounokwenza uxhathise ukhuseleko kunye nobumfihlo bokusebenzisa iwebhusayithi. Isebenzisa ukukhuselwa kwekhowudi yewebsite ebonisa umngxongo wokhuseleko,apho abahlaseli banokufikelela kwiziko leziko. Kusuka kule ngqiqo, kuthatha umzamo wabagculeli abanamava ukufumana ingcambu kunyeukufikelela kumncedi ukusuka kwindawo ekude ngokusebenzisa inethiwekhi - formulario php email pronto. Nge-SQL Injection, umntu unokukwazi ukuqokelela ulwazi kwi-websiteezifana negama lomsebenzisi, amaphasiwedi nolwazi lwekhadi lesikweletu.
uLwimi lweSicelo oluHlangeneyo (SQL), luloluhlu lwenkqubo, evumela ikhompyuthaukufikelela, ukuhlela okanye ukubhala idatha kumncedisi. I-SQL Injection isebenza kwezinye iindidi ezithile zeenkcukacha zeseva, ezibonisa olu hloboubungozi. Ezinye zeenkcukacha ezixhomekeke kulo hlaselo ziquka iMMS SQL Server, Oracle, Access, Filemaker Pro, kunye ne-MySQL. Ukususela kwiumbono weprogramm, yonke ifom ye-intanethi okanye ibhokisi ekufakeni inkalo yombhalo inika ithuba lokusebenzisa umyalelo kumncedisi. NikChaykovskiy, i Semalt Umphathi oyiNtloko wabaPhumelela kwabaThengi, uchaza ukuba abahlaseli bawasebenzisa le ntsholongwane kwiinkcukacha zolwazi kwaye bafezekise izihlaselo ezininzi.
Ukungena kwe-SQL emsebenzini
Uninzi lwewebhu luxhasa ezinye iifom apho umsebenzisi angenayo enye idatha..OkuIkhefu yindlela ephela apho abathengi banokubambisana nesayithi kwaye bafumane ezinye iimfuno zabo kunye nezisombululo kwisheke. Amasimu, anokuthiVumela imilayezo yokufaka njengalezi ziquka iifom, iitheyibhile, izicelo zenkxaso, amaqhosha okuphanda, amasimi eenkcazo, amasimi ezengxelo, ubhaliseiifom kwakunye nokungena kwiifom. Umncedisi ufunda idatha kule fomu njengomyalelo, ovumela umsebenzisi ukuhlela nokuguqula ulwazikwiseva. Ezinye iindlela zokuphelisa ukuhlaselwa kwezi zibandakanya ukubhalwa kweenkcukacha kwiifom zokungena ngaphambi kokufikelela kumncedisi.
Ukuhlaselwa kwe-SQL Injection kusetyenziswa eli thuba. Kukho umngcipheko kumncedisi, okoabaninzi abahlaseli basebenzise ukuqhuba ezinye iintlobo zemithetho yale hlaselo. Izigwenxa zilahla ukhuseleko lweevava ngokubeka ezinyeiintlobo zemithetho kwi-server. Olu hlaselo lunokubonisa ulwazi olubalulekileyo njengolwazi lonke olukhoyo ngefom ye-text input.Ngaphezu koko, i-hacker ingakwazi ukulayisha iifayile, ukukhuphela, ukuhlela, ukubuyisela okanye ukucima iifayile ezikhoyo kumncedisi walezi zolwazi. itKubalulekile ukusebenzisa ikhowudi yokukhusela xa uyila iwebhusayithi.
Kuzo zonke iinkampani ze-e-yorhwebo ukuqhuba ngokufanelekileyo, kufuneka kubekhoinqanaba elaneleyo le-cyber security guarantee. Nangona kunjalo, senza iiwebhsayithi zijolise kubuchwephesha, ezivumela urhwebo okanye ukuthengaevela kumthengi. Injongo yomqwengqele ayisoze yaqwalaselwa, kwaye oku kwenza yonke inkqubo inobungozi. I-SQL Injection yinto ethileuhlobo lwe-hacks, olusebenzisa ubuninzi bekhowudi ezininzi zewebhu. I-hacker ingakwazi ukungena kumncedisi kwaye yenza ezinye zezona zikhuluukuhlaselwa kunye nokuhlaselwa. Olu hlobo lokungakhuselekanga luyakunciphisa ukhuseleko lwewebsite, kwaye oku kungenza imizamo yakho ye-SEO iphumelele. Ungabenzisa le khokelo ukuphepha ukuhlaselwa kwe-SQL Injection kwisayithi lakho. Ukongezelela, unokubangela ukuba abaxhamli bakho bakhuphe ingozi ezayo kwaye ugcinezikhuselekile ekuhlaselweni.